इतिहासदेखि सताइएका 'योनीका कथाहरू' :: Setopati
इतिहासदेखि सताइएका 'योनीका कथाहरू'
‘योनीका कथाहरू' मा जस्तै।
'योनीका कथाहरू' मा एक अंगका आँखाबाट त्यो अंगसँग जोडिएका शारीरिक र मानसिक पत्र उप्काउने प्रयास गरिएको छ।
यो अमेरिकी नाटककार इभ इन्सलरद्वारा लिखित 'भजाइना मोनोलग' को नेपाली संस्करण हो।
'योनीका कथाहरू' त्यस्तै छ।
'योनीका कथाहरू' हेरिसकेपछि यी सबै प्रश्नको जवाफ पाइन्छ।
'योनीका कथाहरू' मा सबैभन्दा पहिला सुनाइएको कथाको पात्रलाई श्रीमतीले योनीको रौं नकाटेको मन पर्दैन। त्यो उसको व्यक्तिगत रुचिको विषय हुन सक्छ। यो पनि सम्भव छ, ऊ त्यस्तै कुनै बाह्य तत्त्वको सिकार भएको होस्। नाटकले त्यस्ता खाले बाहिरी तत्त्व र तिनको असरलाई जरैसम्म हल्लाउने कोशिस गरेको छ। असंवेदनशील हुँदै गएको समयलाई संवेदनशील बनाउने प्रयत्न गरेको छ।
यो नाटकले प्रभाव पारेको एउटा घटना बेलायती पत्रिका 'द गार्डियन' ले छापेको थियो।
मलाई थाहा छैन, यो नाटकका विगतका तीन शृंखला क-कसले हेरे? त्यसरी हेर्नेमा कानुन निर्माण गर्न बसेकाहरु परे कि परेनन? म नाटक हेर्न गएको दिन धेरै दर्शक पुरूष थिए। उनीहरू योनीका कथा सुनेर पक्कै आफूभित्रको पुरुषवादी सोचाइमा घोरिए होलान् भन्ने विश्वास गर्छु। नाटकको अन्तमा पुरुष पात्रको 'म यस्तो पुरुष बन्न सकूँ' भन्ने कविताले आजको समाजमा पुरुषहरूबाट के आउन जरुरी छ भन्ने उजागर गरेको छ।
'योनीका कथाहरू' ले यस्ता संरचनागत प्रश्नको जवाफ खोज्दै जान्छ। जवाफ भेट्छन् कि भेट्दैनन्, त्यो दर्शकमा भर पर्छ। ती जवाफ विश्लेषण भएर छरिन थाल्नुपर्छ। तिनले समाजको मुकुन्डो उतार्न थाल्नुपर्छ।
यति हुँदाहुँदै जसरी 'भजाइना मोनोलग' को पटकथा गतिशील छ, त्यही रूपमा गतिशीलता नआएजस्तो लाग्छ। यसलाई अझै नेपाली सन्दर्भमा ढाल्ने ठाउँ थियो। नेपाली योनीहरूले भोगेका अरू समस्या बटुल्ने र सुनाउने ठाउँ थियो।
एउटा कथामा श्रीमानले दु:ख दिएको प्रसंग अतिरञ्जित गरेजस्तो लाग्छ। हामी अक्सर कुनै कुरामा कसैलाई दोष दिन अगाडि सरिहाल्छौं। त्यसले खास समस्या समाधान गर्दैन। 'योनीका कथाहरू' ले धेरै ठाउँमा ठूलो समस्या देखाएर दोषी किटान गरेको छ। त्यसो हुनुको सट्टा को दोषी होलान् भन्ने देखाउन खोजेको भए त्यस्ता पात्र पनि देखिन सक्थे, जसलाई धेरैले समस्या मानेका हुँदैनन्। तिनले समाजमा ठूलो बाधाको भूमिका भने खेलिरहेका हुन्छन्।
लेखक इभ इन्सलरले भनेकी छन्, 'यो नाटक योनी हुनु भनेको के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। यसको मतलब योनी भएकी महिलाको परिभाषा हैन।'
यस अर्थमा यसले नेपाली समाजमा योनी हुनु भनेको के हो त भन्ने पक्षमा काम गरेको भए सन् १९९६ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको 'भजाइना मोनोलग' नेपालबाट नयाँ उचाइमा जाने थियो।
'भजाइना मोनोलग' नेपालमा प्रस्तुत हुनु ठुलो कुरा हो, तर नेपाल काठमाडौं मात्र हैन। सहर मात्र पनि हैन। यसले दिन खोजेको सन्देश र चेतना बाँकी ठाउँसम्म कसरी पुग्छ? यसमा भनिएका कथाका वास्तविक पात्रले कसरी सामाजिक न्याय पाउँछन् भन्ने ठूलो चुनौती छँदैछ। जे भइरहेको छ त्यसले अपेक्षा पक्कै बढाएको छ। किनकि, 'भजाइना मोनोलग' अमेरिकी समाज र रंगमञ्चमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको कृति हो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २४, २०७४, १२:१६:०४